I-7 eyahlukileyo kakhulu yenoveli yolwaphulo-mthetho ngo-Okthobha | Uncwadi lwangoku
Zisi-7 izinto ezahlukeneyo zenoveli yolwaphulo-mthetho ngo-Okthobha
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Inoveli emnyama
Iyeza Oktobha, ekwindla kuyeza (ngethemba lokuba kanye), elona xesha lifanelekileyo lokuqalisa ukufuna indawo yokuhlala ekhaya ngencwadi elungileyo, ngokufanelekileyo inoveli emnyama abo kuthi bathanda kakhulu. Phakathi kwezihloko ezininzi eziza kuphuma kwinyanga ezayo ndikhetha ezi 7. Isibini sababhali bomthonyama, esokugqibela Ibhaso leRBA inoveli emnyama, intle Perry, isiJamani Bannalec kunye ephazamisayo UFitzek noKatzenbach.
1 Ukunyamalala eTrégastel - uJean Luc Bannalec
2 Isihlalo 7A-Sebastian Fitzek
3 Jonga i-psychoanalyst -John Katzenbach
4 Konke okuhle - uCésar Pérez Gellida
5 Isiqithi samazwi okugqibela - uMikel Santiago
6 Uvukelo - uWalter Mosley
7 Ukufa e-Blackheath-u-Anne Perry
Ukunyamalala eTrégastel -UJean Luc Bannalec
Siya kwi Ukuhanjiswa kwe6nd kolu thotho lweenkwenkwezi lukomishinala IGeorges dupin, Owona mpu melelo mkhulu ufezekiswa eJamani. Masikhumbule ukuba uJean Luc KwiBhannalec yiyo isibizo ukusuka kumshicileli waseJamani kunye nomguquleli wemvelaphi yeBreton UJörg Bong.
UGeorges Dupin, omnye umzekelo wamapolisa aseYurophu amatyala abo enzeka emaphandleni nakwiindawo ezibonakala zinoxolo, ngeli xesha kubonakala ngathi uthatha ezinye zeholide. Kodwa kuba engenakonqena, uyonwaba ngokujonga okwenzekayo kuye.
Ngokukhawuleza uyifumana umfanekiso uyanyamalala ye chapel port, emva bahlasela isekela Ngexesha lomboniso kwaye ekugqibeleni nako umfazi uyanyamalala. Kodwa eyona nto iphambili yile ukufumana isidumbu. UDupin uza kuqala ukuphanda amatyala ngasese.
Isihlalo 7A -USebastian Fitzek
Kuba ibisikhathaza ngokwaneleyo nge Uvavanyo UFitzek ukhethekileyo kwi Thriller ngokwengqondo. Ngeli xesha kusithatha i-40.000 iinyawo ukuya kwinqwelomoya kunye UMat Krüger, onayo panic ukubhabha. Kwaye luloyiko olukhulu oluhlala lusenza okuninzi imanias neenkolelo.
Kodwa iyahamba kunye neqela amatikiti ezihlalweni ngokwamathuba okusinda yintoni ekwimiqolo nangexesha lokubaleka. Kolu hambo luthile iLegendAir eBuenos Aires-Berlin nayo ibhukishe isihlalo 7A, eyona inobungozi kuko konke njengoko iqinisekisiwe, ukuze kungabikho mntu uhlala kuyo kwaye angabeki emngciphekweni wokufa.
Nangona kunjalo, lonke icebo lakhe liyawa xa efumana i umnxeba apho umntu eberlin anayo waxhwila intombi yakheosele eza kuzala, kwaye ubeka imeko inye ukuba angambulali: ukuphazamisa inqwelo-moya. Ke ingxaki iyasetyenzwa: gcina ubomi babathandekayo bakho, abo bakhweleyo abangama-600 kwinqwelomoya kwaye uphephe olona loyiko lwakho lukhulu: ukufa kwingozi yenqwelomoya.
Jonga i-psychoanalyst -UJohn Katzenbach
Enye ingcali kwi ba vuyayo ngokwengqondo, UKatzenbach ubuya nogqirha wakhe uStark kunye nenxalenye yesibini yetayitile emnyusileyo ukuba aphumelele.
Ngoku sineminyaka emihlanu kamva. U-Starks ubuyisile kwakhona impilo yakhe yobungcali kwaye ubuyela ekusebenzeni njenge-psychoanalyst. Uhlala eMiami kwaye ukhathalela ulutsha olunengxaki zengqondo kunye nezigulana ezisisityebi ezivela kuluntu lwaseFlorida.
Kodwa ngobunye ubusuku, xa engena eofisini yakhe, ufumanisa esofeni unobangela wobusuku bakhe obubi kakhulu kwaye wayekholelwa ukuba ufile, Rumplestilskin. Nangona kunjalo, le iyamothusa xa ecela uncedo. Kwaye kucacile ukuba uStarks akazokwazi ukwala.
Konke okugqibelele -UCesar Pérez Gellida
Inkqubo ye- 25 ngo-Oktobha eli bali elitsha nguPérez Gellida waseValladolid. Sele ingu isihloko sesi-XNUMX somsebenzi wakhe. Uye waxela kunxibelelwano lwasentlalweni apho asixelele khona ukuba le noveli intsha igcina imixholo evela kwezangaphambili ezinje ngesimbo sakhe esimnyama, uphando lolwaphulo-mthetho kunye nombulali obulalayo. Kodwa yongeza abanye njenge ezobuntlola kunye neMfazwe ebandayoKuba ibekiwe ngaphakathi EBerlin ngo-1980.
Isiqithi samazwi okugqibela -UMikel Santiago
Sele iphume, kodwa siqinisekile ukuba isenzo sethu siza kuba kunye ngo-Okthobha. USantiago unjalo omnye utitshala wesizwe del Thriller kwaye oku kunayo yonke imiqondiso yokuba yimpumelelo entsha.
Eli xesha siza kulo Isiqithi esilahlekileyo kuLwandle lwaseMantla apho a okwethutyana kwaye phantse bonke sele bebalekile kwinqanawa yokugqibela. Akukho bantu bangaphezulu kwamashumi amahlanu abaseleyo, kubandakanya Carmen, Umfazi waseSpain osebenza kwihotele encinci yendawo, kunye neqaqobana le balobi. Bona bafumana imfihlakalo isitya sensimbi ecaleni kwamawa. Ukusuka apho siza kubona ukuba banokwenza ntoni ukuze baphile.
Ukungcatsha -UWalter Mosley
Yisihloko esithi oku Angelino umbhali Ndiphumelele nje I-XII RBA Award yamapolisa. Iinkwenkwezi zalo mcuphi kwinkcubeko yeklasikhi yaseRaymond Chandler, ogama linguJoe King Oliver.
UOliver wayenyanisekile Ipolisa laseNew York ngendawo ethambileyo yabasetyhini. Kodwa waye neentshaba ezinamandla kwi-Corps kwaye wayenjalo ulixhoba lomgibe Oko kwamfaka entolongweni. Iziphumo yayikukulahlwa ngumfazi wakhe kunye notshintsho ekugxekeni kwaye engonwabanga ngombono wakhe wehlabathi. Ngoku Umcuphi wabucala kwaye unoncedo lwakhe intombi ekwishumi elivisayo, nguye yedwa ongamvumeli ukuba abe yedwa.
Kodwa xa ufumana ileta yomfazi apho avuma khona ukuba wahlawulwa ukutyhola ngokuhlaselwa ngokwesondo ukumvalela, uJoe uthathe isigqibo sokuphanda ngabaphi abadlali beqela lakhe ababekwazi ukwenza iyelenqe lokuwa kwakhe kunye nezizathu zokwenza njalo. Lakhe khangela ubulungisa kunye nokukhululwa komntu Iya kukukhokelela kwitreyini yamagosa anyanzelisa ukuthotyelwa komthetho kunye namagqwetha atyhaphazayo ngalo lonke eli xesha kufuneka ukhathazeke ngokukhusela intombi yakho.
Ukufa eBlackheath -U-Anne Perry
U-Anne Perry lelinye lawona manenekazi makhulu uhlobo noir kuhlobo lwayo lweVictorian. Abalinganiswa bakhe abakhulu kunye nabathandekayo ngumhloli UThomas Pitt kunye nenkosikazi yakhe uCharlotte. Esi sihloko ibinguye inombolo yokuhambisa engama-29 kolu ngcelele lweenkwenkwezi kwaye ngoku luyaphuma kushicilelo lwepokotho. Ngeli xesha isenzo senzeka kwidolophu yakhe, iBlackheath, apho umbhali wazalelwa khona ngo-1938.
Kweli bali, nanjengoko engumlawuli we ISebe elikhethekileyoUmsebenzi wokugcina iBritane ikhuselekile kwiintlola nakubathengisi, uPitt uya kothuka xa eyalelwa phanda izehlo ezibonakala ngathi zincinci: ukufunyanwa kwegazi, iinwele kunye neglasi eyaphukileyo kwikhaya lengcali yezixhobo zomkhosi wamanzi uDudley Kynaston, kunye nokunyamalala ngaxeshanye kwintombazana kaNkskz.
Nangona kunjalo, kamva Isidumbu esonakeleyo senkazana engaziwayo kufutshane nekhaya likaKynastons kunye noPitt, uya kuqonda ukuba ayilophando nje lwamapolisa olo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Zisi-7 izinto ezahlukeneyo zenoveli yolwaphulo-mthetho ngo-Okthobha
Iminyaka eli-100 ukusukela ukuphela kweMfazwe yokuQala yeHlabathi. Iincwadi ezi-7 zokumkhumbula.